Baarlamaanka Faransiiska Oo Meel Mariyay Sharci Cusub oo laamaha Ammaanka u ogolaanaya in ay xiri karaan Masaajidda.
Wednesday October 04, 2017 - 20:23:02 in Wararka by Super Admin
Baarlamaanka Wadanka Faransiiska ayaa qalinka ku duugay Sharci cusub oo ku aaddan waxa loogu yeero La dagaalanka Argagixisada, kaasi oo awood dheeraad ah siinaya laamaha Amniga iyo Wasaaradda arrimaha gudaha.
Sharciga waxa uu awood badan siinayaa Ciidamada Bileyska, isagoona u ogolaanaya inay xiri karaan Masaajidda iyo Madaarista islaamiga ah ee sida ay sheegeen looga shakiyo inay ku boorinayaan waxa ay ugu yeeraan Naceybka iyo gacan ka hadalka.
Sharcigan oo ay u codeeyeen Golaha hoose ee Baarlamaanka Faransiiska ayaa waxaa meel marintiisa ogolaaday 415 Xildhibaan, halka ay diideen 127 kale, sida ay ku warrameen Warbaahinta dalka Faransiiska.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Geeraar Kooloom ayaa sheegay in Faransiisku uu ku jiro xaalad dagaal, ayna laamaha ammaanku dhib badan kala kulmayaan ka hortagga waxa uu ku sifeeyay Xagjirayaasha Maxalliga ah iyo kuwa Ajaaniibta ah, sidaas darteedna ay lama huraan tahay in Booliisku ay heleen awoodo dheeraad ah oo xagga Sharciga ku saabsan.
Wareysi uu bixiyay Wasiirka arrimaha gudaha kadib fadhiga ay yeesheen Baarlamaanka ayaa waxa uu ku yiri : "Xildhibaannadu waxay fahmeen in khatarta maanta jirta inay tahay mid weyn, ayna waajib nagu tahay inaan Nafteenna ka illaalino Argagixisada". Wuxuu hadalkiisa kusii daray " Sharcigani wuxuu gacan ka geysanayaa bad baadinta Shacabka Faransiiska".
Dhinaca kale, Dowladda Wadanka Biljamka ayaa sheegtay inay dalkeeda ka ceyrineyso Imaamka Masjidka weyn ee magaalada Brusseles, kaas oo lagu magacaabo Sheekh Cabdul Haadi Suweyf.
Wasiirka Socdaalka ee dalka Biljamka Tiyuu Faraankan ayaa sheegay in Imamaamkani uu khatar kuyahay ammaanka Qaranka ee dalka Biljamka, islamarkaana dowladdu ay go'aansatay inay dalkeeda ka musaafuriso.
Sheekh Cabdul Majiid Suweyfayaa muddo 13 sano ah waxa uu ku noolaa dalka Biljamka, waxaana dacwadda loo heysto ay xiriir la leedahay weerarkii bishii Maarso ee sannadkii 2016-kii ka dhacay dalka Biljamka, kaas oo ay ku dhinteen inkabadan Soddon qofood.